ISPM :Mirona any amin’ny fivoaran’ny teknolojia ny mpianatra.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire sept 1, 2017
Mandray anjara amin’ny Salon de la rentrée universitaire, eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka ny Institut Supérieur de Polytechnique de Madagascar (ISPM). Hatramin’ny fanombohan’ny hetsika omaly, 31 aogositra 2017, mahaliana ireo mpianatra vao afaka fanadinana bakalorea ny lalam-piofanana momba ny teknolojia toy ny serasera, ny fifandraisan-davitra… VIDEO
SALON DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE : Hifarana androany ny hetsika.
Nanomboka omaly ny Salon de la rentrée universitaire, andiany 2107. Mbola manana fotoana anefa ireo mpianatra vao afaka bakalorea hitady ny oniversite mifanaraka amin’ny lalam-piofanana tian’izy ireo ho rantovina. Oniversite maro no mampahafantatra ny karazana lalam-piofanana misy ao amin’izy ireo eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka. Manodidina ny dimam-polo ny trano heva hita eny an-toerana